Maxay Af-Urur muhiim u tahay? - BBC News Somali
20 Luulyo 2018
Image caption Af urur waa meel istaraatiji ah oo 30 KM u jirta laamiga Boosaaso gala
Bishii Juun ee sannadkii hore ayey ahayd markii dagaallamayeyaal ka tirsan Al Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidanka Puntland ku lahaayeen deegaanka Af Urur oo qiyaastii Boosaaso u jira in ka yar 70 KM.
Wararku waxay sheegayaan in weerarkaaas ay askar ilaa 30 ah ku dhinteen, laakin Al Shabaab waxay sheegteen inay dileen tiradaa laba-laabkeed.
Gurmad xoog leh ayaa halkaa gaaray, fariisin intii hore ka xoog badan ayaana laga sameeyey, hase yeeshee Sannad ka dib ayey ciidanka Puntland halkaa ka baxeen ayadoo aan weerar lagu soo qaadin, waxaana soo galay Al Shabaab oo sida wararku sheegayaan gubay meelihii ay ciidanku ka bexeen, markii dambena iyaga qudhooda isaga baxay.
Haddaba maxay Af Urur muhiim u tahay?
Af urur waxay ku taalla Buuraleyda Golis, waxayna 30 KM u jirtaa waddada laamiga ah ee ka timaada Qardho ee Boosaaso aadda.
Puntland waxay muhiim ugu tahay maadaama ay u dhowdahay Boosaaso oo ah magaalo ganacsi oo deked leh, halbowlena u ah dhaqaalaha Puntland. In loo soo dhowaado waxay khatar galinaysaa jiritaanka Puntland.
Al Shabaab waxay muhiim ugu tahay inay awooddooda balaarin karaan. Waxaa la aaminsanaa in aysan Galgala soo dhaafi karin, laakin in Af urur ay qabsadaan waxay muujinaysaa in cududdooda ay ku baahin karaan deegaanno kale.
Image caption Xeeldheerayaashu waxay aaminsan yihiin in Puntland ay xeel milateri uga baxday Af urur
Al Shabaab ma haysan karaan Af urur?
Dr Zakariye Yuusuf oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka wuxuu qabaa in taasi ay ku xiran tahay inta ay le'eg tahay cududda ciidan ee Puntland, iyo istaraatijiyada ay ka lleeyihiin Al Shabaab deegaanka Af-Urur.
"Waxaa laga yaabaa in Al Shabaab ay is leeyihiin 'bal fiiriya in awoodooda ay qaybsami karto iyo in kale' oo istaraatijiyad noocaas ah ay dheelayaan, laakin Puntland ayey ku xiran tahay awoodda ay u leedahay inay ku quusiso Al Shabaab" ayuu yiri.
Wuxuu intaa raaciyey "Puntland haddii ay shacabkeeda abaabusho way kari kartaa in ay dib ugu celiso Al Shabaab meeshii ay hore u joogeen".
Dagaalka Tukaraq iyo culayska Puntland ka haysta Shabaab.
Laba wajhadood ayaa ku sida muuqata ku furan Puntland. Dagaalka Tukaraq xeeldheerayaashu waxay u arkaan in Puntland iyo Somaliland midkoodna aysan dani ugu jirin. Sababta waxay ku macneeyeen in ay xoog iyo xoolaba ku bixinayaan dagaal dhexdooda ah, halka Al Shabaab ay labada maamul u aaminsan yihiin kuwo aan shareecada islaamka dabakhaynin, oo ay banaan tahay in lagu jihaado. Taa micnaheedu waa in aysan kala jeclayn.
Ka bixitaanka Puntland ee Af-Urur oo markii hore loo sawirtay in Puntland uu culays milateri qabsaday ayaa waxaa meesha ka saaray Dr Zakariye oo u arka inay dhici karto in xeel milateri looga baxay.
"Waxaa dhici karta in akhbaar laga helay oo meesha looga baxay, ma aha wax aan sheegi karno sababta dhabta ah" ayuu yiri Dr Zakariye.
"Haddii aragti midaysan iyo siyaasad horumar leh lagu wajaho amniga Puntland, waxaa hubaal ah inay iska difaaci karaan Al Shabaab" ayuu sii raaciyey.
Image caption Labada dhinac midkoodna iminka gacanta kuma hayo
Dhinaca dawladda dhexe ayuu tilmaamay inay waajib ku tahay inay Puntland kala qayb qaadato sidii ay isaga difaaci lahayd Al Shabaab, "laakinse waa inay Puntland la timaado istaraatijiyad lagu caawiyo".
Waxaase is weydiin mudan haddii dawladda federaalka ay ka kaalmayso Puntland inay iska difaacdo Al Shabaab, ma ku abuuri kartaa Somaliland shaki ah in taageeradaas aan loo isticmaalin in Al shabaab lagula dagaalo oo kaliya?